Ukukhetha uhlobo Resistor: Fixed okanye eliguqukayo
Ndingayithatha i-benadryl nge-tylenol
Abaxhasi bangena kwiincasa ezimbini ezisisiseko: ezinzileyo kunye nezitshintshayo. Zombini ezi ntlobo zihlala zisetyenziswa kwiisekethi zombane. Nantsi into ephantsi kuhlobo ngalunye kwaye kutheni ungakhetha enye okanye enye:
UKUYA ukuxhathisa okungagungqiyo unikezela ukuxhathisa okusisigxina, okuzimiselwe ngumzi-mveliso. Uyayisebenzisa xa ufuna ukuthintela okwangoku ngaphakathi kuluhlu oluthile okanye ukwahlula amandla ombane ngendlela ethile. Imijikelezo enee-LEDs zisebenzisa izixhathisi ezimiselweyo ukunciphisa umda okwangoku, ngaloo ndlela ikhusela i-LED kumonakalo.
UKUYA ukuxhathisa okungafaniyo, njengesiqhelo potentiometer ( unako Ngokufutshane), ikuvumela ukuba uhlengahlengise ukuxhathisa ukusuka kwi-zero ohms ukuya kwixabiso elizimiselwe ngumzi-mveliso. Usebenzisa i-potentiometer xa ufuna ukwahluka isixa sangoku okanye ombane osibonelela kwinxalenye yesekethe yakho. Imizekelo embalwa apho unokufumana khona i-potentiometers kukukhanya okunciphise ukukhanya, ulawulo lwevolumu lweenkqubo zomsindo, kunye neenzwa zokuma, nangona ulawulo lwedijithali ubukhulu becala lutshintshe i-potentiometers kubathengi be-elektroniki.
Jonga ngakumbi izixhobo ezichaseneyo nezingafaniyo. Eli nani lilandelayo libonisa iisimboli zesekethe ezisetyenziselwa ukumela izixhathisi ezingagungqiyo, potentiometers, kunye nolunye uhlobo lwesixhathisi esiguqukayo esibizwa ngokuba zintso. Ipateni ye-zigzag kufuneka ikukhumbuze ukuba ii-resistors zenza ukuba kube nzima ngoku ukudlula, kanye nje ngekinki kwipayi eyenza kube nzima ukuba kudlule amanzi.
Iimpawu zesekethe zesixhathisi esisigxina (ngasekhohlo), potentiometer (embindini), kunye ne-rheostat (ngasekunene).
Iimpawu ezichaseneyo zenzelwe ukuba zichasane ngokuthe ngqo, kodwa ukuxhathisa okwenene kwanoma yiphina inkunkuma ingahluka (phezulu okanye phantsi) kwixabiso layo eliqhelekileyo ngepesenti ethile, eyaziwa ngokuba yi-resistor's unyamezelo.
Yithi ukhetha i
enokunyamezelana okungama-5%. Ukuchasana okwenyani okunikezelayo kunokuba naphi na
(kuba i-5% ye-1,000 ngama-50). Unokuthi ukuxhathisa kunjalo
nika okanye uthathe iipesenti ezintlanu.
Kukho iindidi ezimbini zokuchasana okungagungqiyo:
Standard-ngqo resistors zinokwahluka naphina ukusuka kwi-2% ukuya kwi (gulp) i-20% yamaxabiso azo. Ukuphawulwa kwempahla yokuxhathisa kuya kukuxelela ukuba ingaba kude kangakanani olona xhathiso (umzekelo, +/- 2%, +/- 5%, +/- 10%, okanye +/- 20%). Usebenzisa ukumelana ngokuchaneka okumiselweyo kwiiprojekthi ezininzi zokuzonwabisa kuba (amaxesha amaninzi kunoko) usebenzisa izichasi ukunciphisa umda wangoku okanye ukwahlula i-voltages kuluhlu olwamkelekileyo. Ukunyamezelana nge-5% okanye i-10% yokunyamezelana kuhlala kusetyenziswa kwiisekethe zombane.
High-ngqo resistors beza ngaphakathi kwe-1% kuphela yexabiso labo. Usebenzisa oku kwiisekethe apho ufuna ukuchaneka okugqithileyo, njengakwixesha elichanekileyo okanye kwisekethe yesalathiso sevolthi.
Iimpawu ezichanekileyo zihlala ziza kwipakethe ye-cylindrical kunye nezikhokelo ezimbini eziphumayo ukuze ukwazi ukudibanisa nezinye izinto zesekethe. Zive ukhululekile ukufaka izixhathisi ezingagungqiyo nangayiphi na indlela kwiisekethe zakho - akukho khohlo okanye ekunene, phezulu okanye ezantsi, okanye ukuya okanye ukusuka xa kufikwa kwezi zixhobo zincinci zimbini.
Uninzi lwezinto ezichasayo ezichaseneyo zinombala ofakwe umbala kunye nexabiso lonyuliweyo kunye nokunyamezelana, kodwa ezinye izinto ezichasayo zinexabiso eligximfiziweyo kwiphakheji encinci, kunye neqela labanye oonobumba kunye namanani aqinisekisiweyo ukubangela ukudideka. Ukuba awuqinisekanga ngexabiso lesixhathisi esithile, khupha i-multimeter yakho, usete ukulinganisa ukunganyangeki kwi-ohms, kwaye ubeke iinkqubo zayo ngaphesheya kwesixhathisi (nangayiphi na indlela), njengoko kubonisiwe. Qinisekisa ukuba isichasi sakho asifakwanga kwisangqa xa ulinganisa ukuxhathisa kwaso; ngaphandle koko, awuyi kufumana ufundo oluchanekileyo.
Sebenzisa iseti yemultimeter yakho kwi-ohms ukulinganisa ukunganyangeki kwesixhathisi esisigxina.
Uyilo lweesekethe zihlala zikuxelela ngonyamezelo olunokuxhathisa olusebenzayo, nokuba ngaba luchasene nomntu ngamnye okanye zonke izichasi kwisekethe. Khangela i-notation kuluhlu lwamacandelo okanye njengombhalo osemazantsi kumzobo wesekethe. Ukuba iskimu asichazi ukunyamezelana, unokucinga ukuba kulungile ukusebenzisa izixhathisi zokunyamezelana (+/- 5% okanye +/- 10%).
iyeza elifanelekileyo lesibindi esinamafutha
humulin 70 30 insulin
indlela yokudlulisela phambili iifowuni kwi-iphone
iipinworms ezifileyo kwisitulo emva konyango
Amagama eepilisi zolawulo lokuzalwa lweenyanga ezi-3
Ngaphezulu kwekhawuntari yonyango lwe-balanitis
ngequbuliso ulambile lonke ixesha ubhinqileyo